Iran : Fiakaran’ny vidim-piainana sy ny Voatabia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2017 10:45 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Matetika lavin'ny fitondrana ny fiakaran'ny vidim-piainana, ary manome antoka mihitsy aza izy ireo fa zavatra foronon'ny vahiny sy ny haino aman-jery izany. Saingy nandritra ny volana vitsy lasa, haingana sy goavana loatra tsy mbola nisy tahaka izany tao Iran ny fiakaran'ny vidim-piainana. Amin'ny ampahany, noho ny vidin-tsakafo eny amin'ny tsena iraisam-pirenena no anton'ny fiakarana, ary ny hafa kosa milaza fa noho ny tsy fahombiazan'ny politika toekarena no antony. Niresaka momba ny fikaram-bidim-piainana ireo bilaogera Iraniana maromaro.
Tsy afa-manoatra ireo tantsaha ary tsy miraharaha ireo mpitondra
Eghtesaddaneh nanoratra fa tsy manana fiarovana mihitsy ireo mpamboly ary zara raha voasolotena eny amin'ny andrim-panjakana. Hoy koa izy :
Misolo tena kokoa ny saranga antonony sy ny mpiasa ny Minisiteran'ny Fambolena, fa tsy ny mpamboly. Sarangan'ny mangingina ireo tantsaha. Efa renao nanao fihetsiketsehana ve izy ireo? Efa mba nanohitra ireo sakana amin'ny fifanakalozana malalaka ve ny Minisiteran'ny Fambolena?
Nilaza koa izy hoe: “Tsy mba mahazo fanampiana mihitsy ireo tantsaha rehefa misy ny loza voajanahary, tsy tahaka ireo firenena indostrialy sy ny firenena ao Amerika Atsimo. Ao amin'ny tanàna misy ahy, ao Kashan, saika ravan'ny hatsiaka avokoa ireo sahan'ampongaben-danitra.”
Athalolah Mohajerani, Minisitra reformista teo aloha momba ny kolontsaina nanoratra tao amin'ny bilaoginy fa mifanohitra amin'ny nolazain'ilay mpitondra fivavahana matanjaka, Mahdavi Kani, tsy misy idiran'ny fihenan'ny fanjifàna ny fiakaran'ny vidim-piainana. Miampanga ny governemanta ho tsy mihaino ireo manam-pahaizana manana traikefa izy. Ho azy, ny fandrendreham-bahoaka sy ny politika mifototra amin'ny teny filamatra no tompon'andraikitra amin'ny fiakaram-bidim-piainana ankehitriny.
Soweyda kosa nilaza fa nanaiky ny fiakaran'ny vidim-piainana i Hadad Adel, filohan'ny parlemanta Iraniana, nilaza izy fa fara faharatsiny, nisy ny fandriampahalemana. Mihevitra ilay bilaogera fa nampitaha an'i Iran amin'ireo mpifanolo-bodirindrina izy ary nanamarika fa mety handrahona ny fandriampahalemana ny fiakaram-bidim-piainana sy ny olana ara-toekarena.
Dehyari nilaza fa tsy afaka ho atsahatry ny lahateny ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Raha sambany nandà i Ahmadinejad fa tsy misy ny fiakaran'ny vidim-piainana ao Iran, roa taona izay, nilaza izy fa tsy mbola ambany tahaka izany tao anatin'ny efa-polo taona ny fiakaran'ny vidim-piainana. Vao enim-bolana monja izay, nampanantena hoavy mamiratra izy. Diso avokoa izany fanambarana izany.
Nilaza koa ity bilaogera ity fa tsy afaka handefitra amin'ny fiakaram-bidim-piainana tahaka izany intsony ny fiarahamonina Iraniana, ary tsy misy fotony ny politikan'i Ahmadinejad.
Araka ny filazan'i AmirKhosro kosa, depiote folo no nanohina an'i Ahmadinejad ary minisitra telo nanontany momba ny olan'ny fiakaram-bidim-piainana.
Nilaza ny bilaogin'ny fikambanan'ny Mpianatra Islamika ao Shahr Kurd [Fa] fa vao haingana i Mehdi Karoubi, filohan'ny parlemanta teo aloha no nitsikera an'i Ahmadinejad, ary nanasa azy mba handinika ny olana momba ny trano sy ny fivelomana, fa tsy variana te-hitondra izao tontolo izao.
Lafo be ny voatabia
Azarmoghan nanoratra tamim-piesoesoana fa niakatra be ny vidin'ny voatabia ka afaka maka sary miaraka aminy izahay. Nisolo ny akondro ho voankazo lafo vidy ny voatabia
Parse dar Bozorgrah indray nampatsiahy fa niresaka vidin'ny voatabia i Ahmadinejad, nilaza fa ambany ny vidiny ary takatry ny rehetra tamin'ny taona lasa tao amin'ny faritra misy azy, saingy toa nanaiky ny fiakaran'ny vidiny ireo mpanjifa. Tsy hita intsony tao anatin'ny sandwitch sasany ny voatabia.
Shagard koa mampatsiahy antsika fa mitentina 2 euro ankehitriny ny kilaon'ny voatabia, raha mandray eo hoe eo amin'ny 80 Euro kosa ny mpiasa!
Sary tao amin'ny Flickr:
* ampongaben-danitra ao ambanin'ny oram-panala, avy amin'i Varahran.
* Voatabia eny an-tsenan'i Hamadan, sary avy amin'i Mary Loosemore.